Chelsea Oo Beenisay Wararka Roman Abramovich Ee Ku Saabsan Amaahda Iyo Qiimaha
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo Beenisay wararka Roman Abramovich ee ku saabsan amaahda iyo qiimaha
May 6, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa soo saartay bayaan ay ku beeninayso in Roman Abramovich uu wax ka badalay wax shuruud ah oo ku saabsan iibka kooxda.
Inkasta oo dawladda Ingiriisku ay isbeddelka lahaanshaha ka saartay gacanta oligarch-ka Ruushka, Abramovich ayaa sheegay bishii March in aanu filaynin in uu helo 1.6 bilyan oo gini oo amaah ah oo uu Chelsea ku siiyay in dib loo bixiyo.
Si kastaba ha ahaatee, warar maalmihii la soo dhaafay soo baxayay ayaa sheegayay in Abramovich uu bedelay maskaxdiisa, horumarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbaheysiga uu hoggaamiyo Todd Boehly loo aqoonsaday inuu yahay kan la doorbidayo.
Fiidnimadii Khamiista, kooxda Premier League ayaa si rasmi ah uga hadashay wararka la isla dhexmarayo, iyagoo sheegay in Abramovich uu weli ka go’an yahay inuu daboolo sheegashooyinkiisii ​​hore iyo inuu ka shaqeynayey sidii uu u sameyn lahaa hay’ad samafal oo hore loogu tilmaamay ” dhibanayaasha Ukraine”.
War qoraal ah oo uu soo saaray Abramovich ayaa lagu yidhi: “Ugu horreyntii, ujeeddooyinka Mr Abramovich ee la xidhiidha hadiyadda lacagta ka soo baxda iibka Chelsea ee samafalka waxba isma beddelin.
“Tan iyo markii lagu dhawaaqay bilowga, kooxda Mr Abramovich waxay aqoonsadeen wakiilo sare oo ka socda hay’adaha Qaramada Midoobay iyo hay’ado samafal oo waaweyn oo caalami ah kuwaas oo loo xilsaaray samaynta Foundation iyo dejinta qorshe hawlaheeda. qaab dhismeedka iyo qorshayaasha bilowga ah.
“Mr Abramovich shaqadan kuma lug lahayn, waxaana si madax bannaan u maamulay khubaro khibrad sannado ah u leh inay ka shaqeeyaan hay’adaha samafalka.
“Marka labaad, Mr Abramovich ma uusan codsanin wax deyn ah in loo soo celiyo isaga – soo jeedinta noocaas ah gabi ahaanba waa been abuur – sida soo jeedinta ah in Mr Abramovich uu kordhiyay qiimaha kooxda daqiiqadii ugu dambeysay. Chelsea FC, si kastaba ha ahaatee waxa uu ku dhiirigeliyay qandaraasle kasta inta hawshan lagu gudo jiro in uu maal gashado Naadiga – oo ay ku jiraan Akadeemiyada, kooxda haweenka, dib u dhiska lagama maarmaanka ah ee garoonka iyo sidoo kale ilaalinta shaqada Chelsea Foundation.
“Kadib cunaqabateyn iyo xayiraado kale oo ay UK ku soo rogtay Mr Abramovich tan iyo markii lagu dhawaaqay in kooxda la iibinayo, deynta ayaa sidoo kale noqotay mid lagu soo rogay cunaqabateyn EU, oo u baahan ogolaansho dheeraad ah. Taas macnaheedu waa in lacagaha la xayiri doono oo loo maro habraac sharci ah. Lacagtan ayaa wali loo qoondeeyay Hay’adda, Dawladdu way ka warqabtaa xannibaadahaas iyo sidoo kale saamaynta sharciga ah.
“Si aad u caddeyso, Mr Abramovich ma haysto wax marin ah ama xakameynaya lacagahan mana heli doono wax marin ah ama xakameynaya lacagahan ka dib iibka. iyo in la hubiyo in dakhligu u socdo sababo wanaagsan.”
Iibka Chelsea waxa uu u baahan yahay in la dhamaystiro May 31, sababta oo ah shatiga dawladda ee gaarka ah ee kooxda ayaa dhacayo taariikhdaas